Wararka - Isticmaalka tamarta Shiinaha ee “laba -koontarool” oo la casriyeeyay iyo saamaynta ay ku leedahay warshadaha dharka ganacsiga ee shisheeye.
Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada warkan.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in “dxakamaynta isticmaalka tamarta ual ”ayaa saamayn gaar ah ku yeelatay awoodda wax -soo -saarka ee qaar ka mid ah shirkadaha wax -soo -saarka, iyo bixinta amarada warshadaha qaarkood waa in dib loo dhigaa. Intaa waxaa dheer, Xafiiska Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Deegaanka ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha ayaa soo saaray “Qorshaha Xakamaynta Hawada Dayrta iyo Jiilaalka ee Gobollada Muhiimka ah 2021-2022 (Qabyo Qoraalka)” bisha Sebtember. Xilliga dayrta iyo xilliga jiilaalka (laga bilaabo Oktoobar 1, 2021 illaa Maarso 31, 2022) Japan), warshadaha qaarkood ayaa diiradda la saari doonaa, waxaana laga yaabaa in awoodda wax soo saarka la sii xaddido.
“Sida ku cad niyadda kulanka degdegga ah ee gobolka 20-ka Sebtember iyo ruuxa tilmaamaha ka imanaya hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn ee dawladda gobolka, gobolka waxaa looga baahan yahay inuu si dhakhso leh u hirgeliyo dhimista korantada iyo yareynta culeyska shirkadaha muhiimka ah ee tamarta cuna. Dhammaan deegaannada waa in ay sugaan ammaanka iyada oo la raacayo xaqiijinta amniga. Shirkadaha tamarta ayaa joojin doona wax soo saarka ilaa dhammaadka bisha. Qaybta korontadu waxay tallaabooyin u qaadi doontaa shirkado muhiim u ah tamar-cunista oo aan xidhin ka hor 11:00 Sebtember 21. Wadar ahaan 161 shirkadood oo degmadeena ah ayaa ku lug leh, kuwaas oo dhammaantood ku jira warshadaha daabacaadda iyo midabaynta iyo warshadaha fiber kiimikada.
Degmada Keqiao, Shaoxing, Zhejiang, waa xoogga ugu badan ee warshadaha daabacaadda, dheehidda iyo warshadaha dharka ee Aasiya, iyo awoodda daabacaadda iyo midabaynta ayaa u dhiganta ku dhawaad ​​40% wadarta guud ee dalka. Tan iyo 22 -kii Sebtembar, ku dhawaad ​​200 warshadood oo daabacaadda iyo midabaynta ah oo ku yaal Degmada Keqiao ayaa asal ahaan dhammaantood jaray korontadii waxayna joojiyeen wax -soo -saarkii ilaa dhammaadkii Sebtembar. Siyaasadda warshadda dharka samaysa ee korontada xaddiday oo wax-soo-saarka xaddiday ayaa hoos u dhigtay heerka hawl-maalmeedka aqoon-is-weydaarsiga oo ahaa in ka yar kala bar, shaqaalaha badidoodna waa inay shaqada joojiyaan fasaxyada. Dhab ahaantii, kaliya maahan Shaoxing, Zhejiang, laakiin sidoo kale gobollo badan oo dalka ah ayaa ka fulinaya tallaabooyin lagu yareynayo korontada laguna yareeyo wax -soo -saarka iyo ilaalinta tamarta iyo yareynta qiiqa. Inta badan warshadaha daabacaadda iyo midabaynta iyo warshadaha dharka sameeya ayaa wajahaya dhibaatada ka dhalan karta joojinta wax soo saarka ilaa heerar kala duwan. Waxaa la fahamsan yahay in tan iyo sanadkii la soo dhaafay, sababta oo ah cudurka dillaacay ee dibedda, tiro badan oo ah amarada dharka ee shisheeye ay soo noqdeen. Warshadaha dharka ee daabacaadda iyo midabaynta gudaha ayaa si degdeg ah u ballaariyay awoodda wax -soo -saarka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira karti -darro iyo kaydinta sare. Dhawaan, maaddaama warshadaha daabacaadda iyo midabaynta iyo warshadaha dharku ay leeyihiin awood iyo wax -soo -saarid xaddidan, awoodda wax -soo -saarka ee warshadahaan dharka ah ayaa la cadaadiyey, wax -soo -saarka ayaa bilaabay inay hoos uga dhacaan heerar sare, sicirrada iibintuna sidoo kale waxay bilaabeen inay xoogaa kor u kacaan.
Haddii aad xiisaynayso alaabada shirkadeena, waxaan kugula talineynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u dalbato, si aan hore ugu sii diyaarinno khadka wax -soo -saarka si loo hubiyo in amarkaaga lagu bixin karo waqtigii loogu talagalay. degelkayaga fadlan hubi ：https://www.lymeshfabric.com/